Posted by ကြည်ကြည် at 11:51 PM3comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 6:40 AM 11 comments:
အတွေ့စားမှာလား အငွေ့စားမှာလား အမြင်နဲ့စားမှာလား.......ပုံဂံခရီး...
အရင်ဆုံးပြောချင်တာက လူရွှင်တော်တွေ ပျက်သလို အတွေ့မစားဘူး နတ်ဆိုတာအငွေ့ပဲ စားတာဆိုပီး နတ်တင်ထားတဲ့ အရာတွေကိုပြန်ယူတော့ နတ်ဟန်ဆောင်တဲ့ လူက စိတ်တွေတိုရော ဟော.ခု ကျွန်
မတို့ အတွေ့ အငွေ့ တင်မဟုတ်တော့ဘူး။ မျက်လုံးနဲ့ပါစားတတ်နေကြပြီ။ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့လူတွေ ကလည်း ချက်ပြီးတင်ကြ။ ဆူရှိကျွမ်းကျင်လှပစွာ လိပ်တတ်တဲ့သူတွေကလည်း ကြွား အဲ့လေ fb မှာလာလာကျွေး ..း)
တစ်လောက မယ်ဇလီဖူးသုတ်လေးစားချင်တော့ စားနေတဲ့သူငယ်ချင်းကို ယုံဘူးဓတ်ပုံပြ ဆိုတော့ဓတ်ပုံလေး ပို့လာရှာတယ်.. ဓတ်ပုံလေးကြည့် ပြီးကိုယ့်မှာအရသာခံ တောနယ်ဆိုတော့ စာကလေးအမွေးလောက်နံနံပင် ၄ ပင်လောက်ကို ယန်း၂၀၀လောက်ပေးနေရတာကိုး ။ မယ်ဇလီဖူုးဆိုတာတော့ ဝေးလို့ .. ကိုယ်မေမေ့ပြောသလိုဆိုရင် ပျော်ပါဘူးအေ ညည်းတို့ ဂျပန်တွေ မုန့်ဟင်းခါးမနက်တိုင်းစားမှ ကျူပ်အဲ့မှာနေမယ်ဆိုသလိုသာဆိုခက်ပြီ။ ဒီတော့ကိုယ်လည်းမျက်လုံးနဲ့ စားတတ်နေတာကြာပေါ့။ ဂျပန်တွေက အရသာအပြင် တစ်ကယ်လည်း မျက်စိပသာဒ ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးစားတယ်။ ကြည့်ပါလား ဒီမှာ မယုံရင်
ရာသီရယ်ရာသီဥတုလေးရယ်ပေါ်ကိုမှီပီး ပုဂံခွက်ယောက်တွေကိုသုံးတယ်။ အရသာကတော့ နာဂိုယာ အရာသာ ကျိုတို အရသာ တိုကျိူအရသာ ဟိုကိုင်ဒိုးအရသာဆိုပီး သတ်မှတ်ကြပြန်ရော . နဂိုယာအရသာကြတော့ နည်းနည်းပြင်းတယ်။ မိဆိုး(miso)တို့ ဆားတို့ သိပ်သုံးသလိုပဲ. ဟော..ကျိုတိုဘက်ကြတော့ အရသာက ပေါ့ပေါ့လေး ဟင်းရည်လေးတွေဆိုလည်းကျဲတယ်။ တိုကျိူလိုနေရာမျိုးမှာ ကျိုတိုမှာ ဆိုင်ရင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဂျပန်ဆိုင်စစ်စစ်ကဈေးကြီးတယ်။
US တော့မသွားတော့ပါဘူး။ တစ်ပွဲကို ၄ဒေါ်လာဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ မကိုက်ဘူး……….း)
မြို့တော် တိုကျိုဆိုတာက တော့ အရသာကစုံတယ်။ မြို့တော်ဆိုတာ အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က တောသားတွေ လာစုတာကိုး.....း) ဒီတော့ နယ်ပေါင်းစုံက စားသောက်ကုန်အကုန်ရ။ အင်းအဲ့လို ပြောလို့ တိုကျိုသူတွေ ကြားရင် စိတ်နာမလားပဲ...
ကျိုတို ကဟင်းရည်တွေက ကျဲတဲတဲလေးကို အရွက်သေးသေးမွှေးမွှေးလေးတွေ ကလည်းထည့်
တတ်သေးတယ်။ ခက်တာက နေရာတိုင်းအတူတူလို့ ထင်ရင်တော့မှားပေမပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ၂၀၀၂ လောက်က ပေါ့။ ကြည်ကြည် ဒီမှာနေခဲ့တုန်းက မိသားစုက မြန်မာပြည်လိုက်လာရော ဒီလိုနဲ့ ကြည်ကြည်တို့ပုဂံသွားတယ်။ နိုင်ငံခြားသားအစားများတဲ့ green elephant စားသောက်ဆိုင်မှာစားတယ်။ သူကမြစ်ဘေးလေးကို ကြည့်ပြီးတမာပင်ကြီးကြီးရဲ့ အောက်မှာခုံကလေးတွေချပေးထားတာ။ ထမင်းစားရင်း တစ်ခါတစ်ခါကိုယ့်ပန်းကန်ထဲ တမာရွက်ကလေးတွေ က လေအဝေ့မှာကြွေကျသေး…………
အဲ့တုန်းက မီနူးက တန်ပူရာ ပုဇွန်ကင် ထမင်းကျော်နဲ့ အသုတ် ပဲကြာဆံဟင်းချို အပြင် အပေါ်က ပုံလေးကလည်းSet ထဲမှာပါလာတယ်။ ပုဂံဆိုတော့ ဟင်းခွက်လေးတွေ က ယွန်းခွက်တို့ နောက် အင်တုံတို့ ပေါ့…..စားလည်းပြီးရော. ယွန်းခွက်လေးထဲ အပေါ်က ပုံအတိုင်း ထည့်ထားတဲ့အရာကို ဂျပန်အမေကြီးကဂွတ်ကနဲ့မော့သောက်လိုက်ရော အထဲက ဂန္ဓာမာပန်းလေးပါကောက်ဝါးလိုက်သေး ...………………….ပြီးတော့အရသာမရှိဘူုးတဲ့..........
၀ိတ်တာလေးကအမောတကောပြေးလာတယ်………….အမ အဲ့ဒါပုစွန်ထုပ်စားပြီးရင် လက်ဆေးဖို့ တဲ့ ....
ဆူရှိပုံ google မှ ယူပါသည်။
Posted by ကြည်ကြည် at 4:13 AM2comments:
ဒီနေ့ ကျွန်မ ရန်ကုန်က လုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်ဝင်ရသလို ပထမဦးဆုံး စကားပြန် ကိစ္စတစ်ခု ကိုလည်း လက်ခံပေးလိုက်ရပါတယ်။
ရုံးက သွားနေကျ တယောက် က ခွင့် ယူမယ်ဆိုပြီး သိထားလို့ ဒီကိစ္စ ကို တလကြိူတင်လေ့ လာ ပြီး လက်ခံခဲ့ သလို ဘာသာပြန်ရမယ့် အကြောင်းအရာတွေ ကို လည်း ကြိုပြီးလေ့ လာထားရပါတယ်။
လာတဲ့သူက ငယ်လည်း ငယ်တယ် လုပ်ငန်းတခု က လူလတ်ပိုင်း ရာထူးလောက် ဆိုတော့ အတော်လည်းကြီးကျယ် မယ်ဆိုပြီး သူ့ အကြောင်းတွေကို လည်းသိသင့်သလောက် ဂျပန်ရုံးဘက်ကနေ လှမ်းပြောပြထားပါတယ်။
တခြားသော ၀န်ကြီးဌာန များ လုပ်ငန်းများကို သွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရုံးက အမ တစ်ယောက်က ညီမလေးရယ် မြန်မာ ၀တ်စုံကောင်းကောင်းတွေ ချုပ်ပြီးဝတ်ပါလား။
ကိုယ် က စတိုင်နဲ့လှလှ ပပ ဆို ပိုပြီး အင်ပရက်ရှင် ပို ရှိတာပေါ့ဆိုပြီး ကိုယ့်ကို အ၀တ် အစားက အစ အဆင်သင့် လုပ်ပေးရှာပါတယ်။ လှလည်းအတော်ကို လှပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့့ အဲ့ ဒီ နေ့ကို ရောက်လာပါတော့တယ်။
လေဆိပ်ကို ရုံးက ဂိုက် အမျိုးသားတယောက်က သွားပြီးကြိုပါတယ် ကျွန်မ ကတော့ဟိုတယ်ကနေ စောင့်ပေါ့။ ရုံးကနေ သူတို့ တည်းမည့်ဟိုတယ်က နီးတာရယ် ရုံးမှာ တောက်တိုမယ်ရ ကျွန်မ မှ မရှိရင် တခါတလေ အဆင်မပြေတော့ ကျွန်မ က အလုပ်၇ှပ်တဲ့ နေ့တွေ ဆို နောက်ကျတဲ့ အထိနေပေးရပါတယ်။
ကျွန်မတို့ အလုပ်က အကုန်လုံးလိုလို က လစာကိုနည်းနည်းပိုတောင်းကြပြီး လူကတော့ နည်းပါတယ်။ နည်းနည်းနဲ့ ကျဲကျဲ ၀ိုင်းထားကြတာပါ။
ဟိုက်ရှာဘားလို့သာ စိတ်ထဲကနေ ရေရွတ်မှိလိုက်ပါတယ် ဆင်းလာတဲ့ သူက ကြာချည်နဲ့ ချုပ်ထားတဲ့ကောင်းဘွိုင်ဦးထုပ် အဖြူ ကို ကြာခြည်နဲ့ ပဲ ချုပ်ထားတဲ့ဆု အနက်နဲ့ တွဲ ၀တ်ထားပါတယ်။ ကြာချည်က အကြမ်းကိုတောင် တကိုက်ကို အခုဆို ဒေါ်လာအနည်းဆုံး ၁၅၀ အထက်မှာတော့ရှိမှာပါပဲ (ရန်ကုန်ဈေးပါ)
လက်ထဲ မှာ လည်း LV အိတ်ကို ကိုင်ပြီး သူ့ သေတ္တာ က လည်း အဲ့ အမျိုးအစားသေတ္တာပါပဲ။
အိုးအိုး……. ဒါဆို ဟိူက်ဘော့ စ် လား သို့ မဟုတ် Brand ကို ရူးသွပ်သူလား။
ဒါဆို ရုံးက လူတွေ ခရီးသွားပြီးပြန်လာရင် မုန့် ဖိုးလေးတွေ ရလာတတ်တာတွေ ပြောနေကြကြားဖူးသလို အင်းသူပြန်ရင် ငါလည်းရမှာပေါ့ (စိတ်ထဲ ကချက်ချင်းအဲ့ ဒါကိုတွေးမိလိုက်တာ)
သူနဲ့ နှုတ်ဆက် ………..
ကိုယ့် ကိုယ် စေ့စေ့ ကြည့် ကိုယ့် အကျီကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့ပုံစံနဲ့ ကြည့်အေးလေ သူကိုယ်တိုင်တောင် စမတ်ကျနေမှာတော့ သူ့အနား ၃ရက်လောက်ပါမယ့် သူကိုယ်လည်း စမတ်တော့
တော်သေးတာပေါ့ရုံးက အမ ကိုကျေးဇူးတင်စိတ် က ဖြစ်လာ…….
သူ့ လက်ထဲကို ရုံးက ဖုန်းတလုံးထည့် ………….
ကဲစပြီး ဇာတ်လမ်း မနက်စောစော မသွားနိင်ပါ။ လေ ယာဉ် ချိန်ပြောင်းပေး ကိုယ် ခေါင်းခဲ ပြီ။
ကဲ အဲ လိုင်း ကိုဆက်တော့ အဲ လိုင်းတွေ ပိတ်နေပြီ။ ဒီတော့ လေဆိပ်ကိုဆက် မနက်ဖြန် go show နဲ့ ဆင်းဖို့ လုပ်၊
ကိုယ်တော်က တော့ သေချာကြည့်လေ ချောလေ။ ဦးထုပ်နဲ့သူ့မျက်နှာနဲ့က အတော်ကို ကြည့် လို့ ကောင်းသလို မြင်ဖူးသမျှ ပန်ပန်ထဲ မှာ တော့ အချောဆုံးအဖြောင့် ဆုံးပဲ။
အရပ်ကြီးကလည်း ရှည်မှ ရှည်…………
ဒီလိုနဲ့ ခရီးစထွက်ခဲ့ ကြတယ်။ ကိုယ်တော် က နောက်နေ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပဲ အင်း မြန်မာကောင်မလေးတွေ က ချောသားပဲ စိတ်ထဲ မှာ ယိုးဒယား ဗီယက်နမ်လောက်ပဲ ချောတယ်ထင်နေတာ ဆိုပြီး စကားကို စပါတယ။် ကျွန်မ အနားမှာနေလို့ ကျွန်မ ကို ပြောတယ်မထင်နဲ့ နော်
အဟမ်း… လေယာဉ်မယ်လေးတွေကို ကြည့်ပြီးပြောတာ။
နောက်ပြီး ကိုယ်တော်က စေ့ စေ့ကြည့်တတ်သူလို့ ကျွန်မ သိလိုက်တယ်။ ကမ္ဘောဒီးယားသူတွေက ပါးနီဆိုးရင် ပါးပေါ်ကိုပြေပြေမဆိုးပဲ အလုံးလေးနှစ်လုံးတင်ထားသလိုဆိုးတဲ့အကြောင်း၊ နောက်ပြီး နှုတ်ခမ်းမှာ အနားကွပ်ကို ထင်းထင်းကြီးဆိုးတဲ့ အကြောင်းတွေပြောပြီး အားရပါးရ ရယ်နေပါတယ်။
ဒီမှာလည်းအဲ့ လို မျိုးမြင်ရမယ်ထင်နေတာဆိုပြီး ပြောပါသေးတယ်။ တကယ့် လှူုငယ်လေးတစ်ယောက် ဘော်ဒါတွေနဲ့ စကားပြောနေသလို ကျွန်မကို ပြောနေဆိုနေလိုက်တာ………….
မကြာခင်မှာပဲ ကျွန်မတို့ လေယာဉ်က ပုဂံကိုဆင်းပါတယ်။ အဲ့ နေ့က ပုဂံကနေ မန္ဆလေးကို ဆင်းမှာပါ။
ကျွန်မ တို့ရုံးက အမ တစ်ယောက် ဧည့်သည်တွေနဲ့လေယာဉ်ပေါ်တတ်လာပါတယ် အဲ့အမ ကတော့ အမိုက်စား ပါ။ အချောစားပါ။
သူ့ ကို….. အဲ့ ဒါ ငါတို့ ရုံးကပေါ့ဆိုပြီး မိတ်ဆက်ပေးတော့အင်းငါ့ကျတော့ နင်နဲ့နော် တဲ့ အော် သနားပါတယ်…….သူပြောပုံက ပြီးတော့ပြုံးနေသေးတယ်….ကျွန်မကို စလိုက်ရလို့ ကျေနပ်နေတဲ့ ပုံနဲ့ 
ကျွန်မကတော့ အဲ့ လောက်ချောတဲ့ပန်ပန် နဲ့ ခရီးသွားရတာပျော်လို့ …………….. ပြောရက်လိုက်တာ….
ပါးစပ်ရဲ တဲ့ သူ က တခါတည်း မေးလိုက်တာ က ရုံးက အမ ကို နင့် လောက်ချော ပြီးနင့် လို ဂျပန်လို တတ်တဲ့ လူတွေ ဘယ်လောက်တောင် ၇ှိလည်း မိုက်တယ်နော်တဲ့။
ဟိုအမ ကလည်း ပြန်ဖြေရှာပါတယ်။ ငါ့ လို ချောပြီး ငါ့ လို ခေါင်းကောင်းတဲ့ သူက တော့ငါ တစ်ယောက်ပဲ ရှိပါတယ် ဆို ပြီးပြန်တွယ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မ ကတော့စိတ်ထဲ ကနေ မှတ်ပဟ ..မှတ်ပဟ……
ဒီလိုနဲ့ အလုပ်ကိစ္စတွေ စလုပ်ရပါပြီ။ ကျွန်မကိုယ်လည်း အလုပ်ကိစ္စတွေ ဖိခိုင်းပါတယ် ရှာခိုင်းတာတွေလည်းအများကြီး ညစာကိုလည်းသူ့ ဘာသာသူပဲ စားပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ အော် မယ်ရုပ်ဆိုးတို့ များ ညစာ ထမင်းတောင် ဖိတ်ကျွေးမယ့် သူမရှိပါလားပေါ့…….
ညစာမနက်စာကို ဟိုတယ် ထဲ မှာ အတူတူစားနေပေမယ့် ကျွန်မ ကလည်းသူ စားနိူင်လောက်တဲ့ အချိန်ကို ရှောင်ပါတယ်
ဒီပုဂ္ဂိုလ်က တခုတော့ကောင်းတာလေးက ညလည်စာကို ကျွန်မကို room service နဲ့ပိုးပေးတတ်တာပါပဲ။
အံမယ်စာလေးတောင် ရေးပေးသေးတယ် အလုပ်လုပ်နိုင်အောင် ကျွေးတာပါဆိုပီးတော့ ဟွန်း သူ သိချင်တဲ့ အချက်အလက်တွေလည်း ထည့် ထည့် ပီး မေးတတ်ပါသေးတယ် ဖုန်းနဲ့ တောင်မပြောဘုးနော် room to room ခေါ်လို့ ရတာကိုယ်
နောက် တံတားဦးဘက် အသွား ရေတွေကြီးတော့ ကားသမားက အောက်ကိုဆင်း ပီး ရေထဲဆင်းပါတယ်
ရှေ့ ကနေ အတိမ်အနက်နဲ့ချိုင့် တွေ ကို သိစေဖို့ ပါ ကားသမားက အစ်မလေးရေ လုပ်ပါဦးဆိုတော့ကျွန်မ က စွေ့ ကနဲ ကားသမားထိုင်ခုံ ကို ဂီယာတံ ကို ကျော်ခွ ပီး ထိုင်လိုက်တော့မျက်လုံးသူက ပြူးသွားပါတယ်။….ကားသမားက တုတ်နဲ့အရှေ့ ကနေ ရေကို စမ်းပီး နောက်လှည့်မကြည့်ပဲ လက်နဲ့ သာ လှုပ်ပြပီး မောင်းဖို့ အချက်ပြပေးတယ် ရေထဲံမှာ မောင်းနေတဲ့ ကျွန်မကို သူက ပါးစပ်ကလေးဟ ပြီးကြည့် နေလိုက်တာ…… နောက်ကြည့် မှန်ကနေလှမ်းကြည့် လိုက်ရင် သူက ရယ်ပြပါတယ်……
နောက် ဘာပြောလည်းဆိုတော့့ ရုပ်လှတဲ့ သူတွေ ရုပ်ဆိုးတာလုပ်ရင် အတော်ကို ကြည့် လို့ မကောင်းတာ ဒါပေမယ့် ရုပ်ဆိုးတဲ့ သူတွေ တခါတလေ လုပ်လိုက်တဲ့ အရာလေးတွေကတော့ အတော် ကို ချစ်စရာကောင်းပီး အဲ့ ဒါမျိုးလေးတွေက မေ့ မရတတ်ဘူးတဲ့ ……
အမလေးတော် သူကများ ဒီမှာ ကားထဲရေ ၀င်ပြီး အင်ဂျင်နိုးလို့ မရရင်ဆိုတဲ့အသိက အနည်းနဲ့ အများတော့ စိတ်ပူနေရတဲ့ အထဲ……တကတည်းပေါ့……
ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့် တာဝန်ကိုယ်ကျေပြွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်း နောက်ဆုံးနေ့ 
ရောက်လာပါတယ် သူ့ ကို လေဆိပ်ကို လိုက်မပို့ တော့ပါဘူး ကျွန်မ တာဝန်ကျေပါပီ…………
ရုံးကိုပြန်လာတော့ရုံးအထိ ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့ကို ကျွန်မ ပဲ လိုက်ပို့ပါ လိုက်ပို့မယ့်
သူကိုယ် ခုပဲ ပြန်လွှတ်လိုက်မယ် ပြန်ခါနီးလေးမှ မနှုတ်ဆက်ရရင်တော့ သူစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါ့ မယ် ဆိုပီး…….
ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ လေဆိပ်ကိုရောက်သွားပါတယ် လေဆိပ်ရောက်တော့အချိန်က သိပ်ကပ်နေပြီ
သူ့ ကတော့ ထုံးစံအတိုင်းစတိုင်မိုက်မိုက် နဲ့ ဦးထုပ်အကောင်းစားနဲ့ 
မျက်ခုံးကြီးကလည်းထင်းလို့ သွားလေရာမှာ အားလုံးက အစ်မရယ် အစ်မ ပန်ပန် ကြီး ကချောတာလို့ ပြောတဲ့ သူကြီးပဲ…………..
ဟုတ်ပါဘူး အစ်မ ပန်ပန်ကြီးဟုတ်ပါဘူး ပေါ့ စိတ်ထဲ ကနေ ဟွန်းဟွန်း …………..
သူက လက်ဆောင်ပန်းစည်းကြီးနဲ့စောင့် နေတယ် ဟာ.. ခနဲ ကို ဖြစ်သွားတာပဲ
နောက် နုတ်ခမ်းနီရေမွှေး အစုံပါတဲ့duty free အိတ်အကြည် ကို ကိုယ့် လက်ထဲ လှမ်းထည့် ပြီး
အသားလေးသာဖြူရင်တော့ ပို ပြီးကြည့် လို့ ကောင်းမှာ ဆိုတဲ့ စကားရယ် ကိုယ့် လက်ထဲ ကို ပစ္စည်းကို ထည့် ပေးပြီး ဒိုးမို အရိဂတ်တိုး ဂိုးဆိုင်းအိ မတ်၇ှိတ ဆိုပြီး ကိုယ့် ကို သေသေချာချာ ခါးကိုင်းပြီး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ပေးတာ အရမ်းကို အဆင်ပြေ ချော့ မွေ့ ပါတယ်ဆိုပြီး ယဉ်ကျေးစွာ ကိုယ် အသေအချာ ကျေးဇုးစကားကို ဆိုပြီး နောက်
သူက တကယ်ကို အားရပါးရရီ(ရယ်)ပါတော့တယ်…….
မှင်တတ်နဲ့ နေတဲ့ ကျွန်မမျက်နှာ ၃ ၅ နှစ်နဲ့ မလိုက်အောင် ပြောင်နေတဲ့သူ့ ၇ဲ့ ထိပ် ဦးထုပ်ဆွဲချွတ်မှ မြင်လိုက်တာလေ………….
ဘေးနှစ်ဘက်ကတော့ ကိုလေးပွလို ဆံပင်မျိုးကိုတိုတိုလေး………..
သူကပြောသေးတယ် အဲ့ လို စချင်လို့ စတွေ့ ကတည်းက ဦင်္းထုပ်ကို မချွတ်တမ်းဆောင်းနေခဲ့ တာတဲ့ 
Posted by ကြည်ကြည် at 1:43 AM4comments:
Posted by ကြည်ကြည် at 1:54 AM3comments:
တကယ်တော့ကျွန်မဘလော့ရေးခြင်းဆိုတာကျွန်မရဲ့ အသက်အရွယ်ရယ် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေနဲ့ ယှဉ်ရင်အတော်ကိုနောက်ကြနေသလိုစိတ်မှာခံစားရပါတယ်
နောက်တစ်ခုက ဘလော့ဖတ်ခြင်းဆိုတာကို သေသေချာချာ စူးစူးစိုက်စိုက်အချိန်ပေးပြီးဖတ်နိုင်ခဲ့တာလည်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှပါ
ဖတ်လို့ ကောင်းတဲ့ဘလော့ပေါင်းစုံထဲမှာ ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း အော် ရေးလိုက်ကြတဲ့ အကြောင်းရာတွေစုံလို့ ဗဟုသုတတွေလည်း စုံလို့အနုအရွတွေလည်းစုံလို့ ဆိုပီးတော့
ငါလည်းရေးတတ်ချင်လိုက်တာ လို့ တွေးတောမှိတာခဏခဏပါပဲ။ အဲ့လို တွေးလိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက်
အကြောင်းအရာတွေတင်ပြထားကြတာတွေ များကြလွန်းလို့ ငါ့ နှယ်ဘာသွားရေးရတော့မှာလည်းလို့ တောင်ထင်မှိပါတယ်
ခရီးအသွားတွေများခဲ့ တဲ့ ကျွန်မကိုယ် စာရေးတာဝါသနာပါတဲ့ ဖေဖေ က သမီးရယ် စာတွေမရေးချင်ဘူးလား ရေးပါလားလို့ တိုက်တွန်းခဲ့တာ ဟိုးလွန်ခဲ့သော နှစ်များစွာဆီက တိတိကျကျပြောရင်ရင်တော့
လွန်ခဲ့ တဲ့ ၁၀နှစ်ကျော်ကျော်တည်းက သမီးမရေးတတ်ရင် မှတ်တမ်းအနေနဲ့ရေးပို့ ပေး ဖေဖေ စာပြန်စီပေးမယ်လို့ ကိုယ် အားပေးဘူးခဲ့ ပေမယ့် လွန်ခဲ့ သော ၁၀နှစ်ကျော်တွေတုန်းက အင်တာနက်တို့ 
မေလ်းတို့ ဆိုတာ က ကျွန်မ ချစ်တဲ့အမိမြေကိုပြန်ရောက်တဲ့ ၁၉၉၉ ကုန်ခါနီးမှာတောင် ဘာလည်းညာလည်းဆိုတာမသိခဲ့ကြတဲ့ ခေတ်တွေပါ။
၁၀နှစ်တစ်ခုကိုယ်ဖြတ်သန်းပီးသော သကာလမှာတော့ အလွယ်တကူ စာတွေဖတ်လို့ (အရင်ထက်စာရင်)
ရလာပါတယ် အတွေ့အကြုံတွေကို စာဖြင့်မျှဝေခြင်းတွေက ပိုပြီးထိရောက်လာပါတယ်
ဖတ်ခြင်တာလေးတွေကို အမိမြေကနေ ခေတ္တခွာရတဲ့ အခိုက်အတန့် လေးတွေမှာ အပြင်ရောက်မှ အတိုးချပီးဖတ်ရပါတယ်
အခုဘလော့ရေးမယ်လို့စိတ်ကူးတော့ အမိမြေကိုပြန်လျှင်ရောရေးနိုင်ပါ့မလားလို့ စဉ်းစားနေတာနဲ့ တင် နှစ်ပေါက်သွားပါတယ် အစပြုပြီးရင် ဖြတ်ရခက်တဲ့ စိတ်ကြောင့် မရေးနိုင်ရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်
ဒီလိုနဲ့ ပဲ အမိမြေကို ပြန်တဲ့အခါလည်းနိုင် သလောက်ရေးကြည့်တာပေါ့ဆိုတဲ့စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပီး
ယခု ၈ လပိုင်း ၉လပိုင်း အားလပ်ရက်များကို အသုံးချပီး ဘလော့ စတင်ရေးခြင်းဆိုတဲ့ ကိုလှုပ်ရှားပါတယ်။
ဘလော့တစ်ခုလုပ်ဖို့ လေ့လာရမှာတွေ သိပ်များပါတယ် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိုယ်သာလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်မရဲ့ အားလပ်ရက်တွေ ကုန်တာတောင်
ဘလော့ဖြစ်လာမယ်မထင်ပါဘူး ဒီလိုနဲ့ခင်မင်ရတဲ့ ကိုကောင်းကင်ကိုပဲ နာမည်ရွေးခြင်း မှ အစ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံ နှင့် ဘလော့ လုပ်ခြင်းများအား အပူကပ်ရပါတော့တယ်။
ရတနာသုံးပါနှင့်ကျေးဇူးကြီးလှပါသော မိဘ၊ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ ဆရာသမားအပေါင်းနှင့်
စောင်မကြည့်ရှု စောင့်ရှောက်ပေးပါသော ၇ ရက်သားသမီးတို့ အား ဦး ခိုက်လျှက်
Posted by ကြည်ကြည် at 10:29 PM No comments: